ငယျငယျတညျးက ဘာဆုမှမရခဲ့ပမေယျ့ အခုခြိနျမှာ အဖနေဲ့အမေ ဂုဏျယူနရေပွီဆိုတဲ့ G-Fatt – Askstyle
ငယျငယျတညျးက ဘာဆုမှမရခဲ့ပမေယျ့ အခုခြိနျမှာ အဖနေဲ့အမေ ဂုဏျယူနရေပွီဆိုတဲ့ G-Fatt
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ G-Fattကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “ ငယ်ငယ်တည်းက ဆု တွေဘာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အဖေနဲ့အမေဂုဏ်ယူရမယ့် ဘာဆု မှ မယူပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။အခု လို ဆု ယူရတဲ့အခါ အဖေနဲ့ အမေ ကျွန်တော့်ထက်ပိုပျော်နေမှာပဲ။ဒီဆုအတွက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ကျွန်တော့် ပရိတ်သတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
G-Fatt ကတော့ City FM (18)နှစ်ပြည့် မှာ The Most Popular Male Vocalist For The Year (2019) ဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ G-Fattကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ Hip Hop အဆိုတော်တစ်ဦးဆိုတာ အမှန်ပါပဲနော်။ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေဝန်းရံအားပေးခြင်းကိုခံရရုံသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့ထိမိနေတဲ့စာသားတွေ Flow တွေကို အသေကြွေကြတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မိဘကိုအလုပ်အကျွေးပြုကာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ G-Fattကတော့ အောာင်မြင်မှုတွေဆက်တိုက်ရရှိနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။G-Fattရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် CeleConnections မိသားစုမှ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်။CeleConnections ပရိသတ်တွေလည်း G-Fatt အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောခဲ့ပါဦးနော်။
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ G-Fattကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ “ ငယျငယျတညျးက ဆု တှဘောတှနေဲ့ ပတျသကျရငျ အဖနေဲ့အမဂေုဏျယူရမယျ့ ဘာဆု မှ မယူပေးနိုငျခဲ့ဘူး ။အခု လို ဆု ယူရတဲ့အခါ အဖနေဲ့ အမေ ကြှနျတေျာ့ထကျပိုပြျောနမှောပဲ။ဒီဆုအတှကျ အနယျနယျ အရပျရပျက ကြှနျတေျာ့ ပရိတျသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျ . ဆကျကွိုးစားပါဦးမယျခငျဗြာ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ အမှတျတရပုံရိပျတှကေိုဝမြှေလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
G-Fatt ကတော့ City FM (18)နှဈပွညျ့ မှာ The Most Popular Male Vocalist For The Year (2019) ဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ G-Fattကတော့ တဈနိုငျငံလုံးကပရိသတျတှေ အားပေးဝနျးရံခွငျးခံရတဲ့ Hip Hop အဆိုတျောတဈဦးဆိုတာ အမှနျပါပဲနျော။ မိနျးကလေးပရိသတျတှဝေနျးရံအားပေးခွငျးကိုခံရရုံသာမက ယောကျြားလေးပရိသတျတှကေလညျး သူ့ရဲ့ထိမိနတေဲ့စာသားတှေ Flow တှကေို အသကွှေကွေတယျလို့ ပွောရမှာပါ။
မိဘကိုအလုပျအကြှေးပွုကာ အနုပညာအလုပျတှကေိုဆကျတိုကျလုပျကိုငျနတေဲ့ G-Fattကတော့ အောာငျမွငျမှုတှဆေကျတိုကျရရှိနတေယျလို့ ဆိုရမှာပါ။G-Fattရဲ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ CeleConnections မိသားစုမှ ဂုဏျပွုလိုကျပါတယျနျော။CeleConnections ပရိသတျတှလေညျး G-Fatt အတှကျ ဂုဏျပွုစကားလေးပွောခဲ့ပါဦးနျော။